China DIN975 kofehy kofehy kilasy kilasy 4.8 mpanamboatra sy mpamatsy vy ... Tianbang Fasteners
zavatra Tsorakazo misy kofehy
Vokatra lehibe DIN975
halavan'ny 1m, 2m, 3m, 6m na namboarina
Fanapahana ny diplaoma 45, 50, 60
Fitsaboana hafanana Fanafanana, fanamafisana, famonoana olona, ​​fanamaivanana ny ala, sns
Malagasy GB, DIN, ISO, ANSI / ASTM, BS, BSW, JIS sns
Tsy fenitra OEM dia misy, araka ny sary na santionany
farany Plain, mainty, zinc plated, HDG, Dacromet
Fonosana Fonosana misy paleta, namboarina
Fampiharana 1) .Petrolika, Orinasa simika, superheater an'ny boiler, mpanova hafanana
2) .Fantsom-pamokarana hafahafa tsy mahazaka hafanana ao amin'ny tobin-kery
3) .Fandefasana amin'ny fantsona faneriterena
4) .Ny fitaovana fanadiovana ny setroka
5) .Fananganana sy firavaka
endri-javatra Fanoherana simika Fahamarinana tsy tapaka
Sarany ohatra: mifampiraharaha
Santionany: Azo alaina ho tombana alohan'ny filaharana.
Fotoana santionany: 20 andro eo ho eo
(1) Mila fantarintsika ny habeny, ny habeny ary ny hafa.
(2) Ifanakalozy hevitra miaraka aminao ny pitsopitsony rehetra ary ataovy ny santionany raha ilaina izany.
(3) Atombohy ny famokarana betsaka aorian'ny nahazoanao ny vola aloanao (petra-bola).
(4) Alefaso entana aminao.
(5) Raiso ny entana eo anilanao.
(1) Fitsapana ara-materialy sy fizahana fitaovana ho avy
(2) Fanaraha-maso ny fizahana-QC sy ny fitsapana ny tester
(3) Fitsapana refy
(4) Fandrefesana lanja
(5) Fitsapana mafy
(6) Fitsapana famafazana sira
(7) Fanaraha-maso farany alohan'ny fandefasana
Ny tsorakazo misy kofehy dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana fampiharana sy fampiatoana rehetra. Ny vatofantsika dia natsofoka tao anaty beton hanohanana ny vy vita amin'ny rafitra ary azo ampiasaina miaraka amin'ny epoxy amin'ny fampiharana mivaingana. Ny tsorakazo misy kofehy dia matetika ampiasaina miaraka amin'ny masinina sy / na mpanasa lovia efajoro raha tafiditra ao anaty beton mba hahatratrarana soatoavina ilaina amin'ny fihoarana.
Teo aloha: nandrisika 8. DIN934 Hex nut carbon steel black
Manaraka: DIN603 fitateram-by mitaingina lohan-doha boribory
Tsorakazo kofehy namboarina
Tsorakazo kofehy toradroa Ary ny voa
Vatofantsika misy ny vatofantsika
Bara vy misy kofehy
Hex Socket Head Bolt, Bolt Coupling Nut, Hex Socket Bolt, Sofina voa, Vatofantsika fametahana vy mihantona, Fehikibo vatofantsika fototra,